Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » IATA na-ajụ mkpa maka ule PCR dị oke ọnụ
Airlines • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • News • Iwughachi • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Banye na Hawaii chọrọ PCR COVID - 19. Nke a bụ nnukwu azụmahịa maka ọtụtụ, gụnyere ụlọ ọrụ dịka Longs Drugs, Walgreens, na ọtụtụ ndị ọzọ. Ofgwọ nke $ 110- $ 275 maka ule a chọrọ iji zere iche iche nwere ike ịbụ nkụda mmụọ na nkụda mmụọ maka ezinụlọ. IATA mara na nke a abaghị uru mgbe ị na-achọ ime ka ndị mmadụ fee ọzọ.
Iwu na-emegiderịta onwe ha ma na-agbagwoju anya. Bịaru United States pụtara na nnwale antigen dị ọnụ ala ma na-akwụkarị ụgwọ dị mma ma ọ bụrụ na ị na-aga Hawaii, a chọrọ ọtụtụ oge ọnụahịa PCR dị oke ọnụ.
Associationtù Na-ahụ Maka Transportgbọ njem International (IATA) kpọrọ ndị gọọmentị ka ha mee ihe iji lebara ọnụahịa dị elu nke ule COVID-19 n'ọtụtụ ikpe ma gbaa ume mgbanwe na ikwe ka ojiji nke nnwale antigen dị ọnụ ala dị ka ihe ọzọ na ule PCR dị oke ọnụ.
IATA kwukwara ka ndi gọọmentị nabata na-adịbeghị anya Healthtù Ahụ Ike Worldwa (WHO) nduzi iji tụlee ịhapụ ndị njem ịgba ọgwụ mgbochi site na nyocha chọrọ.
Dabere na nyocha njem ndị njem kachasị ọhụrụ nke IATA, 86% nke ndị zaghachirinụ dị njikere ịnwale. Mana 70% kwenyere na ọnụahịa nke nnwale bụ ihe mgbochi dị mkpa maka njem, ebe 78% kwenyere na gọọmentị kwesịrị iburu ọnụ ahịa nnwale.
"obodo ntà na-akwado nyocha COVID-19 dị ka ụzọ iji mepee ókèala na njem mba ụwa. Mana nkwado anyị abụghị nke ala. Na mgbakwunye na ịbụ onye a pụrụ ịtụkwasị obi, ule kwesịrị ịdị mfe ịnweta, ọnụ ọnụ, ma dabara adaba na ọkwa dị egwu. Ọtụtụ gọọmentị, agbanyeghị, na-ada ụfọdụ ma ọ bụ ihe ndị a niile. Ọnụ ego ule na-adịgasị iche n'etiti ikike, na obere njikọ na ọnụ ahịa ị ga-eme ule ahụ. UK bụ nwa akwụkwọ mmado maka gọọmentị na-anaghị enwe ike ịlele ule.
Na kachasị mma ọ dị oke ọnụ, na nke kachasị njọ. N’ọnọdụ ọ bụla, ọ bụ mkparị na gọọmentị na-ana VAT ụgwọ, ”ka Willie Walsh, Onye Isi Nchịkwa Isi nke IATA kwuru.
Ọgbọ ọhụụ nke ule ngwa ngwa na-efu ihe na-erughị $ 10 kwa ule. N'inye ule rRT-PCR na-akwado ya ka a na-enye maka nsonaazụ nnwale dị mma, ntuziaka WHO na-ahụ nyocha antigen Ag-RDT dịka nnabata ọzọ na PCR. Na, ebe ule bu ihe choro, nke WHO Iwu Ahụike Mba Nile (IHRs) kwuo na ndị njem ma ndị na-ebu ya ekwesịghị iburu ọnụ ego nke nnwale ahụ.
Nwale kwesiri ka o daba adaba n’ebe iyi egwu. Dịka ọmụmaatụ, na UK, data Nlekọta Ahụike Mba ọhụrụ kachasị na ule na-abata ndị njem na-egosi na e mere ihe karịrị nde 1.37 nnwale na ndị bịarutere site na mba ndị a na-akpọ Amber. Naanị 1% nwalere ihe karịrị ọnwa anọ. Ka ọ dị ugbu a, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ okpukpu atọ nke ọnụ ọgụgụ dị mma na-achọpụta ndị mmadụ n'ozuzu kwa ụbọchị.
“Data sitere na gọọmentị UK na-egosi na ndị njem mba dị iche iche enweghị obere ihe mbubata mbubata COVID-19 ma e jiri ya tụnyere ọkwa dị ugbu a nke ọrịa na mba ahụ. Ma ọ dịkarịa ala, ya mere, gọọmentị UK kwesịrị ịgbaso nduzi WHO ma nakweere ule antigen nke dị ngwa, ọnụ, ma dị irè, yana ule PCR na-akwado ya maka ndị na-anwale nke ọma. Nke a nwere ike ịbụ ụzọ enyere ndị ọbụla na-enweghị ọgwụ mgbochi aka ị nweta njem, ”ka Walsh kwuru.
Ibidogharịa njem mba ọzọ dị oke mkpa iji kwado ọrụ nde 46 na njem njem gburugburu ụwa na-adabere na ụgbọ elu. “Nnyocha anyị mere ọhụrụ gosiri na nnukwu ụgwọ nke nnwale ga-ebu oke na ọdịdị nke mgbake njem. Ọ bụ ihe ezi uche dị na ya gọọmentị ịme ihe iji mepee ókèala ma ọ bụrụ na usoro ndị a na-eme ka ọnụ ahịa njem ghara imetụta ọtụtụ mmadụ. Anyị chọrọ ịmalitegharị nke ọnụ ọnụ maka mmadụ niile, ”ka Walsh kwuru.